Luk 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 N’otu oge, mgbe ìgwè mmadụ nọ na-adagide ya, na-egekwa ntị n’okwu Chineke, o guzo n’akụkụ ọdọ mmiri Genesaret.+ 2 O wee hụ ụgbọ abụọ a dọsara n’akụkụ ọdọ mmiri ahụ, ma ndị ọkụ azụ̀ esiwo na ha pụta wee na-asacha ụgbụ ha.+ 3 Ka ọ banyere n’otu n’ime ụgbọ ndị ahụ, bụ́ nke Saịmọn, ọ gwara ya ka o si n’elu ala kwọpụ nke nta. O wee nọdụ ala, malitekwa izi ìgwè mmadụ ahụ ihe site n’ụgbọ+ ahụ. 4 Mgbe ọ kwụsịrị ikwu okwu, ọ sị Saịmọn: “Kwọrọ ụgbọ a banye n’ebe dị omimi, wụnyekwanụ ụgbụ+ unu ka unu wee gbute azụ̀.” 5 Ma Saịmọn zara ya, sị: “Onye ozizi, anyị dọgburu onwe anyị n’ọrụ abalị dum n’egbuteghị ihe ọ bụla,+ ma ebe i kwuru ya, aga m awụnye ụgbụ.” 6 Mgbe ha wụnyere ya, ha gbutere azụ̀ dị nnọọ ukwuu. N’eziokwu, ụgbụ ha malitere ịdọwa. 7 Ya mere, ha feere ndị ibe ha nọ n’ụgbọ nke ọzọ aka ka ha bịa nyere ha aka;+ ha bịakwara, ha wee kpojuo ụgbọ abụọ ahụ, nke mere na ụgbọ ndị a malitere imi. 8 Mgbe Saịmọn Pita+ hụrụ nke a, ọ dara n’ala n’ụkwụ Jizọs, sị: “Onyenwe anyị, si n’ebe m nọ pụọ, n’ihi na abụ m onye mmehie.”+ 9 N’ihi na mgbe ha gbutere azụ̀ ndị ahụ, o juru ya na ndị niile ha na ya nọ anya, 10 o jukwara ma Jems ma Jọn, ụmụ Zebedi+ anya, bụ́ ndị ha na Saịmọn na-arụkọ ọrụ. Ma Jizọs sịrị Saịmọn: “Kwụsị ịtụ egwu. Site ugbu a gaa n’ihu, ị ga na-akụta ndị mmadụ ná ndụ.”+ 11 Ya mere, ha kwọọrọ ụgbọ ndị ahụ gaghachi n’elu ala. Ha gbahapụkwara ihe niile ma soro ya.+ 12 N’oge ọzọkwa, ka ọ nọ n’otu n’ime obodo ndị ahụ, lee! e nwere otu nwoke nke ekpenta zuru ahụ́! Mgbe ọ hụrụ Jizọs, o gburu ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, wee rịọ ya, sị: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha.”+ 13 O wee matịa aka bitụ ya, sị: “Achọrọ m. Dị ọcha.” Ozugbo ahụkwa, ekpenta ahụ pụrụ n’ahụ́ ya.+ 14 O wee nye nwoke ahụ iwu ka ọ ghara ịkọrọ onye ọ bụla.+ Ọ sịrị ya: “Kama gaa gosi onye nchụàjà onwe gị,+ chụọkwa àjà+ maka ime ka ị dị ọcha, dị nnọọ ka Mozis nyere ntụziaka ya, ka o wee bụụrụ ha ihe àmà.”+ 15 Ma okwu banyere ya nọ na-agbasakwu, oké ìgwè mmadụ na-agbakọtakwa ka ha gee ya ntị, ka ọ gwọọkwa ha ọrịa na-arịa ha.+ 16 Otú ọ dị, ọ nọgidere n’ebe ahụ ọ nọpụrụ iche n’ọzara, na-ekpekwa ekpere.+ 17 N’otu ụbọchị, ọ nọ na-ezi ihe, ndị Farisii na ndị na-akụzi iwu, bụ́ ndị si n’obodo nta niile dị na Galili na Judia na Jeruselem bịa, nọkwa ọdụ n’ebe ahụ. O nwekwara ike Jehova nke ọ ga-eji na-agwọ ọrịa.+ 18 Ma, lee! e nwere ndị ikom ndị bu otu nwoke nke ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n’ihe ndina, ha nọkwa na-achọ ụzọ ha ga-esi bubata ya ma dọba ya n’ihu ya.+ 19 Ebe ha na-ahụghị ụzọ ha ga-esi bubata ya n’ihi ìgwè mmadụ ahụ, ha rịgooro n’elu ụlọ, sikwa n’uko ụlọ buda ya n’obere ihe ndina ahụ n’etiti ndị nọ n’ihu Jizọs.+ 20 Mgbe ọ hụrụ okwukwe ha, ọ sị: “Nwoke m, a gbagharawo gị mmehie gị.”+ 21 Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii wee malite ịtụgharị n’uche ha, sị: “Ònye bụ onye a nke na-ekwu okwu nkwulu?+ Ònye pụrụ ịgbaghara mmehie ma ọ́ bụghị naanị Chineke?”+ 22 Ma mgbe Jizọs chọpụtara ihe ha na-atụgharị n’uche, ọ zara ha, sị: “Gịnị ka unu na-atụle n’obi unu?+ 23 Olee nke ka mfe, ọ̀ bụ ịsị, ‘A gbagharawo gị mmehie gị,’ ka ọ̀ bụ ịsị, ‘Bilie gawa ije’?+ 24 Ma ka unu wee mara na Nwa nke mmadụ nwere ikike n’elu ụwa ịgbaghara mmehie—” ọ gwara nwoke ahụ ahụ́ ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị: “Ana m asị gị, Bilie buru obere ihe ndina gị, lawa n’ụlọ gị.”+ 25 O wee bilie ozugbo ahụ n’ihu ha, buru ihe ọ na-ejibu edina ala lawa n’ụlọ ya, na-enye Chineke otuto.+ 26 O wee ju ha niile anya.+ Ha malitekwara inye Chineke otuto. Egwu wee jide ha, ha wee na-asị: “Anyị ahụwo ihe ọhụrụ taa!”+ 27 Ma mgbe ihe ndị a gasịrị, ọ pụrụ ma hụ otu onye ọnaụtụ aha ya bụ Livaị ka ọ nọ ọdụ n’ụlọ a na-anakọta ụtụ isi, o wee sị ya: “Bụrụ onye na-eso ụzọ m.”+ 28 Ọ gbahapụkwara ihe niile,+ bilie wee soro ya. 29 Livaị mekwaara ya oké oriri n’ụlọ ya iji nabata ya; e nwekwara oké ìgwè ndị ọnaụtụ na ndị ọzọ bụ́ ndị ha na ha nọ na-eri nri.+ 30 Ya mere, ndị Farisii na ndị odeakwụkwọ ha malitere ịtamuru ndị na-eso ụzọ ya ntamu, na-asị: “Gịnị mere unu ji soro ndị ọnaụtụ na ndị mmehie na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ?”+ 31 Jizọs zara ha, sị: “Mkpa ọgwọ ọrịa adịghị ndị ahụ́ dị mma,+ kama mkpa ya dị ndị ahụ́ na-enye nsogbu.+ 32 Ọ bụghị ndị ezi omume ka m bịara ịkpọ, kama ọ bụ ndị mmehie, ka ha wee chegharịa.”+ 33 Ha sịrị ya: “Ndị na-eso ụzọ Jọn na-ebu ọnụ ugboro ugboro, na-arịọsikwa arịrịọ ike, otú ahụkwa ka ndị na-eso ụzọ ndị Farisii na-eme, ma ndị nke gị na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ.”+ 34 Jizọs sịrị ha: “Unu apụghị ime ka ndị enyi nke nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ na-ebu ọnụ mgbe ha na nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ nọ, ka ùnu pụrụ?+ 35 Ma ụbọchị ga-abịa mgbe a ga-akpọpụ+ nwoke ahụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ+ n’ebe ha nọ n’ezie; mgbe ahụ ha ga-ebu ọnụ n’ụbọchị ndị ahụ.”+ 36 Ọ gakwara n’ihu inye ha otu ihe atụ, sị: “Ọ dịghị onye na-esi n’uwe elu ọhụrụ achabita ibé ákwà ma dụnye ya n’uwe elu meworo ochie; ma ọ bụrụ na o mee otú ahụ, ibé ákwà ọhụrụ ahụ na-adọkapụ, ibé ákwà nke si n’uwe ọhụrụ ahụ adịghịkwa ekwekọ na nke ochie ahụ.+ 37 Ọ dịghịkwa onye na-agbanye mmanya ọhụrụ n’ime karama akpụkpọ mmanya mere ochie; ma ọ bụrụ na o mee otú ahụ, mmanya ọhụrụ ahụ ga-agbawa karama akpụkpọ mmanya+ ahụ, ọ ga-awụfusikwa, karama akpụkpọ mmanya ahụ ga-alakwa n’iyi.+ 38 Kama a ghaghị ịgbanye mmanya ọhụrụ n’ime karama akpụkpọ mmanya ọhụrụ. 39 Ọ dịghị onye ọ bụla nke ṅụrụ mmanya ochie nke na-achọ nke ọhụrụ; n’ihi na ọ na-asị, ‘Nke ochie+ ahụ dị mma.’”